China Kupa kwe aquarium pet yemagetsi thermometer SD-1 Kugadzira uye Fekitori | Sanhe
Yakakwira-kumagumo microcomputer thermostat STC-300
Hot kutengesa itsva michina yemagetsi tembiricha co ...
Kupisa kutengesa kutonhora kupisa tembiricha EK-3020
Yakakwira-mhando uye chaiyo chikafu dhijitari thermometer WT-1
Refrigeration digital thermometer TPM-10 purofesa ...
Mutengesi BBQ Chikafu Dhijitari Thermometer TP101
Kupihwa kwe aquarium pet yemagetsi thermometer SD-1
220V maindasitiri yemagetsi thermometer JDP-200 ye f ...
Urefu hwese: 46.5mm x 27.5mm x 29.5mm
Dhizaini isina mvura, inogona kunyudzwa zvachose mumvura. Hunhu hwakavimbika, mukombe wekukweva unogona kunyudzwa mukati merusvingo rwemu aquarium, uye iyo yakavakirwa-mukati sensor yakanaka uye ine rupo.
Kupisa kwekuyera renji: -50 ℃ ~ 70 ℃
Kugadziriswa ℃ (> -20 ℃); ℃ (zvimwe)
Kururama: ± ℃
Magetsi: 1 PCS DC1.5V (LR44 / AG13)
Inzira yekuisa: 1 NTC
Basa rakapihwa: Yakasarudzika LOGO, kunyora, yakagadzirirwa mabhokisi ekupakata, zvigadzirwa zvakagadzirwa, nezvimwe zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
Ainge atumirwa: gungwa, mhepo, kuratidza, musuwo kuenda pasuo zvekufambisa masevhisi.
Kurumidza kuendesa: 7-10 mazuva ekuchengetera kumusoro. Mazuva gumi nemakumi mashanu kubva mudura.
Zvandakashanda: sampu dzinogona kupihwa uye kutumirwa kunze mukati memazuva manomwe.
OEM / 0DM Services: Yakagamuchirwa
Payment mazwi: 30% dhipoziti, 70% yekupedzisira muripo pakuendesa
Nzira dzekubhadhara: kubhadhara kubhangi, kubhadhara kwepayipi, Western Union uye dzimwe nzira dzekubhadhara, unogona kubhadhara RMB
Kune akawanda marudzi emagetsi thermometer akagadzirwa uye anogadzirwa nekambani yedu, kunyanya anosanganisira: thermometer yekuyera nzvimbo dzefriji senge inotonhorera inotonhorera, makamuri ekutonhora anotonhora, uye makamuri anotonhora; thermometer yemakungwa uye mhuka dzinovaraidza; thermometer yekuyera tembiricha tembiricha yekurimwa kwemiriwo, maruva nehuswa kuberekesa, nezvimwewo Thermometer zvigadzirwa zvekuyera zvemukati tembiricha uye mwando; thermometer yekicheni yekuyera tembiricha yechikafu, nezvimwe.Chigadzirwa chinoitwa chakatsiga uye chakavimbika, chiyero cheyero chakafara, uye iko kurongeka kwakakwirira.
1, Bvisa chivharo chebhatiri, isa mubhatiri reRR44, nyatsoteerera kuti usadzore iyo polarity. Inotaridzwa mushure memagetsi-on.
2. Simbisa chivharo chebhatiri, teerera kumhete yekuisa chisimbiso inofanirwa kuiswa nemazvo uye isinga kukuvara.
3. Ndokumbirawo ubvise bhatiri kana ikasashandiswa kwenguva yakareba
Bhokisi reji: 47.5 * 42 * 38cm
Pashure: Isina waya yemagetsi thermometer uye hygrometer JW-109
Zvadaro: LCD inoratidzira peturu dhijitari thermometer ST-1A
aquarium yedhijitari thermometer
Thermometer yetangi rehove
Yakakwira mhando chikafu chemagetsi thermometer JDB-23
Nyanzvi yechikafu thermometer TP100 mutengesi
220V maindasitiri yemagetsi thermometer JDP-200 ...
Industrial tembiricha mini uye mwando kupima ...
Chikafu chemagetsi thermometer WT-2 yekicheni
Refrigeration digital thermometer TPM-10 profes ...
otomatiki tembiricha kudzora, thermostat tembiricha controller, aquarium yedhijitari thermometer, digital thermostat controller, Incubator tembiricha controller, thermometer yedhijitari,